Simôna Bar Kôkba - Wikipedia
I Simôna Bar Kôkba dia lehilahy mpitarika ny fikomian’ ny Jiosy tamin’ ny Rômana teo anelanelan’ ny taona 132 sy 135.
Sarin' i Simôna Bar Kôkba
Amin' ny teny arameana ny anarany dia atao hoe שמעון בר כוכבא / Shimon bar Kokhba izay midika hoe "Simôna zanaky ny kintana".
Tamin’ izany fotona izany dia niezaka ny hampanjaka ny kolontsana romana tao Jodea ny emperora Hadriano (latina: Publius Aelius Hadrianus Augustus) ka tsy namela ny Jiosy hiditra ao Jerosalema afa-tsy indray andro isan-taona, ary nandrara azy ireo tsy hanao famorana. Raikitra noho izany ny fikomian’ ny Jiosy. I Bar Kôkba no nitarika izany fikomiana izany, izay notohanan’ ny iray amin’ ireo raby nankatoavin-teny indrindra tamin’ izany, dia i Akiva ben Josefa, izay nanambara azy ho Mesia (hebreo: מָשִׁיחַ‎ / māshîaḥ) nalefan’ Andriamanitra hamerina indray ny fanjakan’ i Israely sy hanjaka amim-pahamarinana amin’ ny olombelona rehetra.
Nanangana tafika vaovao indray i Hadriano nefa mbola ravan’ ny tafik’ i Bar Kôkba izany. Noho izany dia niantso mpitari-tafika mahay i Hadriano, dia i Jolio Severo (latina: Sextus Julius Severus), izay niady nandritra ny andro maro ka nanapitra ny fikomiana jiosy tao amin’ ny famaharana Betàra (hebreo: בֵּיתַּר / Bethar) ao akaikin’ i Jerosalema izy tamin’ ny volana Aogositra 135. Tamin’ izany no nahafatesan’ i Bar Kôkba.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Simôna_Bar_Kôkba&oldid=1001989"
Dernière modification le 4 Martsa 2021, à 12:55
Voaova farany tamin'ny 4 Martsa 2021 amin'ny 12:55 ity pejy ity.